Dadka heysta dhalashada Holland ee degan dalka U.K oo waayi doono dhalashooda Holland.. - NorSom News
Dadka heysta dhalashada Holland ee degan dalka U.K oo waayi doono dhalashooda Holland..
Reysulwasaaraha dalka Holland, Mark Rutte ayaa maalmo kahor sheegay in muwaadiniinta dalkiisa ee qaatay dhalashada dalka Ingiriiska, si ay ugu suurto gasho in ay sii deganaadaan dalkaas, ay waayi doonaan Baasaboorka Holland, marka ay U.K si buuxdo uga baxdo midowga Yurub ee EU-da. Isaga oo taas u sababeeyay in xeerarka hada u dagsan dalkiisa aysan saamaxeyn in qofku uu isku heysto labo dhalasho.
Qiyaastii boqol kun oo muwaadiniin Hollandiis ah oo ku nool Britain, ayaa waxaa soo food-saaray mustaqbal aan la saadaalin karin, maadaama ay Britain si buuxdo EU-da uga bixi doonto dhamaadka 2019. Waxaana dadkaas kamid ah kummanaan Soomaali ah oo degan Ingiriiska, oo kasoo guuray Holland, isla markaana heysta dhalashada dalkaas.
Dowlada Holland ayaa sheegtay in hadii uu qofku isku heysto labo dhalasho, aysan cadeyn xuquuqdiisa-muwaadinimo iyo dalka uu ku leeyahay.
Xigasho/kilde: The Guardian.com
Previous articleCaptan Mohamed A. Jama oo guuldaro ka bad-baadiyay kooxdiisa Tromsdalen
Next article(Dhageyso)-Sabaax Maxamed: Waxaan korsadaa ilmo laga qaatay qoys soomaali ah
Denmark oo Corona-baasaboor u sameyneyso muwaadiniinta dalkeeda.
Ilhaan Cumar: “Waa in magdhow la siiyo” ehellada dadka uu Mareykanka ku ‘dilay’ Soomaaliya
Gabar Soomaali ah oo ‘xadgudub’ loogu gaystay Starbucks ku yaalla Minnesota
Keydka NorSom Velg måned juli 2020 (11) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (78) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (62) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (40) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)